Iwo Semalt Musiyano: Kumusoro kweGoogle uye Beyond
Zvinogona kuva zvakaoma kuudza vatengesi vekutengesa vega.
Sezvazvinoitika, ivo vese vakanaka pakushambadzira ivo pachavo. Kana ivo vese vari kuita zvakafanana zvinoshamisa zvinoti - tora bhizinesi rako pamberi pemaziso mazhinji, turbozheni yako yekutengesa, ita mutengi wako - unoziva chii chekushandisa, uye chei chekufuratira?
Kuti tinzwisise kupatsanura gorosi kubva pahundi, ngatitarisei kune yakazara-stack agency iri kuita zvinhu nenzira chaiyo: Semalt.
Semalt iri SEO uye yekushambadzira sevhisi yakavambwa muna 2013. Iyo kambani ndeye yakazara-stack agency, zvichireva kuti inogona kuburitsa mushambadzi wakazara wekushambadzira kubva kutanga kusvika pakupera. Iyo ine tarenda yakati muminda yeSEO uye analytics, uko inopa huwandu hwehumwe hwakasiyana masevhisi.
Mumakore kubvira pakagadzwa, Semalt yakakura kuva simba rekushambadzira repasi rese. Mushure mekunge aongorora zvakapotsa mamirioni mazana mashanu emasaiti uye achizvikudza pamusoro pevashandisi mazana matanhatu, Semalt akakurumidza kuve mutungamiriri muSEO nenzvimbo yekushambadzira uye arikusaratidza zviratidzo zvekudzikira. Iyo inomiririra inotyairwa netarenda timu yevakagadzira uye nyanzvi, iwe waunogona kusangana pano chaipo!
"Izvo zvese zvakanaka uye zvakanaka," ungadaro, "asi ndoziva sei kuti Semalt yakakodzera nguva yangu nemari?" Kuti upindure mubvunzo uyu isu tinofanirwa kunyatso tarisa masevhisi awo.
Chii chinopa iyo agency inopa maererano neye SEO masevhisi? Iwe unofanirwa kuve unongwarira nezve chero kambani yekushambadzira iyo inovimbisa nyika, kana isina kujeka pamusoro pekuti maSevhisi avo anoshanda sei, sezvo ichi chiratidzo chekuti ivo vachazo underdeliver kana kuti ivo vari kubiridzira system yekupa yakakurumidza asi yakapfuura-yakagara mhedzisiro. .
Muchiitiko chaSemalt, kambani inopa matatu akasiyana e-SEO masevhisi: AutoSEO, FullSEO uye E-Commerce SEO, uye inoenda zvakadzama nezvekushanda kwemukati kweumwe neumwe.
Yakakwana kune chero munhu ari kutarisa kupinza zvigunwe zvavo munyika yeSEO, AutoSEO inopa varidzi vebhizinesi kukurumidza, yakapusa uye inobudirira sumo yekutsvaga injini yekushandisa. It:
Inoongorora webhusaiti yako
Shure kwemvura inogadziriswa
Inosarudza mazwi akakosha
Inopa mishumo yenguva dzose
Uye zvinoita zvese izvi zvishoma se $ 0.99 !
Kune avo vanoda kuona chaiyo uye inogara kwenguva refu mhedzisiro, hapana chinhu chakafananidza kubata kwevanhu, uye ndizvo chaizvo izvo Semalt's FullSEO package inopa. Tora kuongororwa kwakadzika, optimization uye rutsigiro kubva kune nyanzvi timu iyo yakawedzera webhusaiti traffic munzvimbo 177 dzakasiyana. Kana iwe uchida real search engine kubudirira, unoda FullSEO.
E-commerce mawebhusaiti inopa dambudziko rakasiyana zvishoma kune mawebhusaiti asingashande kutengesa online. Semalt's E-Commerce SEO inopa yakavakirwa kubata iyo yakasarudzika mibvunzo inobvunzwa nekutengesa zvinhu uye masevhisi pamusoro pewebhu, nekutarisa zvakashandurwa mibvunzo uye yakaderera-frequency mazwi akakosha mune yako chaiyo niche, ipapo kuwana vatengi chauri kutsvaga.
Semalt uye analytics
Kuziva isimba. Iwe unogona chete kurova vako vakwikwidzi uye kutungamira musika kana iwe uchinzwisisa vako vanokwikwidza uye musika. Iyo yakazara-stack agency inofanirwa kupa iyo yakazara analytics sevhisi iyo inopa kambani yako neruzivo rwese rwaunoda kuti ibudirire.
Semalt Analytics inokutendera iwe kuti ugadzire mufananidzo wakazara wemusika wako nzvimbo. It:
Maitiro aunoita iwe nevakwikwidzi vako
Inotarisisa maitiro emusika anozobatsira iwe kuti usvike kumberi
Inogadzira ruzivo rwekukubatsira iwe kuti uwane misika mitsva.
Iyo inovaka chikuva chemashoko kubva kwaunogona kutanga chirongwa chakazara chebhizinesi.
Kutsvaga zviri pamutemo
Mushure mekunge maongorora nhoroondo yeavo wekushambadzira, muve nechokwadi chekuti ivo vazere, uye nekutarisa kuti vanopa izvo zvinosimudzira, zvemhando yepamusoro, masevhisi anodiwa ayo kambani inotungamira inofanirwa, inguva yekuitora kune vazhinji. Hapana imwe nzira iri nani yekutarisa mhando yemumwe wako angangoita yekushambadzira kupfuura nekunzwa kubva kune avo vakamboita navo kare.
Nyaya dzenyaya inzira huru yekutarisa chaizvo kuti anoshanda anoshanda sei, uye zvaunogona kutarisira kana uchizoshandisa masevhisi avo. Semalt Zviri kakawanda nyaya zvidzidzo website yayo, kukupai kwatakaita kupinda zvose basa wavo results.
Pane nzira iri nyore yekutarisa kuve kwayo kweanomisheni: svetuka pamhepo uone zvinotaurwa nenyika dzepasi rose. Nekuda kwerusununguko rweruzivo rwunopihwa ne internet, iko zvino hazvibviri kuti kambani ivande chokwadi chekuti vari kutora zvidzitiro kana kuti havasi kuburitsa pane zvakavimbiswa.
Tarisa uone mumiriri weGoogle ne Facebook kuongororwa. Kana, saSemalt, vane Google Ongororo mamakisi e4,5 / 5 uye Facebook Ongorora mucherechedzo we4,9 / 5 (pamwe nevateveri vane zviuru zana nematanhatu) , unogona kuvimba kuti iri rakanakisa sarudzo. Semalt anopawo kumusoro mazana akanyorwa uye mavhidhiyo uchapupu panzvimbo yayo, izvo rubatsiro vangangozova vatengi kunzwisisa chaizvo wekambani hwakafanana basa pamwe.
Chinhu chakareruka icho chinogona kubatsira kupatsanura iwo akanakisa maaiti kubva pane zvakasarudzika. Iwe unoda kuziva kuti urikubata nevanhu chaivo vanozokunzwisisa, uye ndiani achazonakidzwa kushanda naye. Kana iyo masangano ichiratidza kwayo kunakidzwa chikamu, icho chiratidzo chikuru.
Tora Semalt's muhofisi mascot, Turbo iyo Turtle, semuenzaniso. Akave chikamu chechikwata cheSemalt pavakatamira muhofisi nyowani muna 2014, kwaakange amusiya iye muridzi wemunda. Iye zvino anonakidzwa nehupenyu mune hombe aquarium, uye kunyange aine yake yevashandi chimiro (iye yekuraira kubvunzana) pane webhusaiti!
Iwo Semalt musiyano
Zvese mune zvese, Semalt inopa yakakwana bhaudhi yezvokutarisa mune yakazara-stack SEO uye yekushambadzira agency. Iyo inopa yakazara suite yemabasa ekuvandudza, yakaongororwa-mushe, ine yakafambiswa rekodhi rekodhi, uye inopa zvese izvi zvakanaka pamutengo unonaka.
Chii zvakare, nekushanda nemakambani munenge nyika dzese pasi, unogona kuvimba kuti Semalt inotaura rurimi rwaamai vako! Chikwata cheSemalt chakapfava muChirungu, French, Italian, Turkish, Ukraine, Russian uye mimwe mitauro yakawanda.
Saka, kana iwe uchitsvaga iyo agency inogona kubatsira kuti bhizinesi yako iende kwainofanira kuenda, wadii kusarudza Semalt?